Coinbase ဆန်းစစ်ခြင်း | ၏ Insights ကိုသိရ Coinbase & သင့်ကုန်သွယ်ရေးအနိုင်ရမည်ဟု - က ISO
cryptocurrencies အတွက်ကုန်သွယ်ပိုပြီးအကျိုးအမြတ်ဖြစ်လာသကဲ့သို့, ကုန်သည်များအမြဲတမ်းယုံကြည်ခြင်းနှင့်လုံခြုံ cryptocurrency လဲလှယ်ရှာကြ၏။ 2018 အတွက်ထိပ်တန်း cryptocurrency ဖလှယ်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် Coinbase။ ဤ Coinbase ပြန်လည်သုံးသပ်သင်နှင့်အတူကုန်သွယ်မှုရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သမျှအချက်အလက်တွေကိုပေးသွားမှာပါ Coinbase နှင့်အမြတ်အစွန်းပါစေ။
"Highly အကြံပြု Coinbase"
အခုတော့ Coinbase သွားရောက်ကြည့်ရှု
နိမိတ်လက္ခဏာကိုတက် '' ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
လာသောအခါပြီးပြည့်စုံသော '' Create Account ကိုနှိပ်ပါ။
သုံးပြီး cryptocurrencies ပေးပို့ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်း Coinbase
ဘယ်လောက်မ Coinbase အဖိုးအခအတွက်ကောက်ခံ?
Is Coinbase ဘေးကင်းလုံခြုံ?
ဘယ်လောက်သင်အပေါ်စတင်မည်နိုင်ပါတယ် Coinbase ပလက်ဖောင်း?
Coinbase ဖလှယ်နှင့် ပတ်သက်. ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များအပြုသဘောဖြစ်ကြသည်။
လိမ့်မည် Coinbase သင့်အကောင့်ကိုစောင့်ကြည့်?
ဤသည်လဲလှယ် 2012 ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှင့်ရက်စွဲရန်, သန်း 12 ကျော်ကုန်သည်များတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဖလှယ်အပေါ်ကုန်သွယ်ပမာဏ USD40 ဘီလီယံခန့်ထက်မလွန်။ 1 တစ်နှစ်အတွင်း Coinbase အမြင့်ဆုံးငွေကြေးထောက်ပံ့မှု startup ခဲ့ပွဲတစ်ပွဲကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံး cryptocurrency လဲလှယ်ခဲ့သည်။
ယနေ့ Coinbase ဥရောပနှင့်မြောက်အမေရိကတွင်အများအားဖြင့်နေသော 32 ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများကျော်ထံမှကုန်သည်များမှရရှိနိုင်ပါသည်။ သငျသညျ Bitcoin, Etherum နှင့် Litecoin အပါအဝင် platform ပေါ်တွင်7ကွဲပြားခြားနားသော cryptocurrencies ရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်။
cryptocurrencies ဝယ်ယူရောင်းချခြင်းအပြင်, Coinbase လည်းကမ်းလှမ်းမှုများ Coinbase Pro ကို (ယခင်က GDAX ပလက်ဖောင်း) ။ ဒီပလက်ဖောင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များထိုကဲ့သို့သော BTC / အမေရိကန်ဒေါ်လာအဖြစ်ထူးခြားဆန်းပြားအားလုံးအတွက်ကုန်သွယ်မှုမှခွင့်ပြုပါတယ်။ ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်အခြားပစ္စည်းများပါဝင်သည် Coinbase ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု, ချုပ်, Paradex, ချုပ်နှောင်ထားခြင်းနှင့်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း။
တစ်ဦးဖွင့်လှစ် Coinbase အသစ်ရဲ့တက်ချိန်ညှိခြင်းအကောင့် Coinbase အကောင့်အတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ သငျသညျပထမဦးဆုံးထောက်ခံနိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုတစ်ခုနိုင်ငံသားဖြစ်လိုပါလိမ့်မယ်။
ယင်းကိုရယူသုံးခြင်းဖြင့်စတင်ပါ Coinbase.com website မှာ။ တနည်းအားဖြင့်, သင်အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းဖြင့်စတင်နိုင်ပါသည် Coinbase အဆိုပါဖြစ်စေထံမှ app ကို Google Play စတိုး ဒါမှမဟုတ် App Store မှာ။
ဤတွင်, သငျသညျ '' သင်တို့၏နာမ, အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်စကားဝှက်များကိုလိုအပ်ပါ။ ဤအမှုကိုပြုသောဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့သင်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအကောင့်များနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်များအကြားရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ထို့နောက်သင်ပေးထားသောအီးမေးလ်လိပ်စာကိုသွားနှင့်ထောက်ပံ့ link ကို click လုပ်ပါ။ ဤအရန်သင့်အား redirect ပါလိမ့်မယ် Coinbase
startup စာမျက်နှာ။ ဒါဟာခြေလှမ်းသင်ပေးထားသောအီးမေးလ်လိပ်စာ legit ကြောင်းအတည်ပြုပေးရန်လိုအပ်သည်။ သငျသညျယခုသင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုအတည်ပြုဖို့တောင်းပါလိမ့်မည်။
ဒါကနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည် Coinbase သင့်အကောင့် 2-Factor ဖော်ထုတ်ခြင်းမှတဆင့်လုံခြုံစိတ်ချစောင့်ရှောက်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သော Google Authenticator သို့မဟုတ် Duo ကဲ့သို့သောအခြားနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ SMS တခုသင့်ရဲ့မိုဘိုင်းနံပါတ်သို့ပေးပို့ပါလိမ့်မည်။ site ပေါ်တွင် code ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
သင့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုအတည်ပြုလိုက်ပါပြီပြီးတာနဲ့အခုသင်သင်နှစ်သက်တဲ့ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, သင်အကြားရွေးချယ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ် Coinbase အမေရိကန်ဒေါ်လာပိုက်ဆံအိတ်, ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းနှင့်အကြွေးဝယ် / debit card ကို။ အဆိုပါအမေရိကန်ဒေါ်လာပိုက်ဆံအိတ်နှင့်အကြွေးဝယ် / ငွေကြိုကဒ်သိုက်လက်ငင်းဖြစ်ကြသည်။
သို့သော် Coinbase cryptocurrencies ထောကျပံ့ပေးမထားတဲ့တိကျတဲ့အကြွေး / ဒက်ဘစ်ကဒ်ပယ်ချနိုင်ပါတယ်။ ဘဏ်လွှဲပြောင်း, အခြားတစ်ဖက်တွင်, ပုံမှန်အားဖြင့်သင့်အကောင့်အပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်း 1 နှင့်5အကြားယူပါလိမ့်မယ်။
ဒီ option ကိုပိုနှစ်သက်သူကိုအများဆုံးကုန်သည်များလိုပဲ, သင်သည်အမေးစေခြင်းငှါ Coinbase နဲ့ငါ့ဘဏ်အကောင့်ချိတ်ဆက်ရန်အန္တရာယ်ကင်း? ပလက်ဖောင်း encrypt လုပ်ထား SSL ကိုကျော်လုံးဝပြေး။ ဤသူသည်သင်တို့ (ဒီအမှု၌ဘဏ်အသေးစိတျ) ကိုပေးပို့မည်သည့်ဒေတာများတရားမဝင်တတိယပါတီဝင်ရောက်မရနိုင်သည်ကိုသေချာ။
သင်ဆိုင်းအပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးစီးနှင့်သင့်အကောင့်ထဲမှာရန်ပုံငွေများရှိပါတယ်ပြီးတာနဲ့, သင်ယခု platform ပေါ်တွင်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်စတင်နိုင်ပါသည်။ ကြီးစွာသောတစ်ခုမှာ Coinbase အင်္ဂါရပ်တွေကိုသင် Real-time cryptocurrency စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူပေးအပ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံး, ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသော Crypto မှတဆင့် browse သငျသညျ '' အရောင်းအဝယ်ဝယ်ဖြည့်စွက်လိုdတရှေးခယျြဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပလက်ဖောင်းပေါ်ထရေးဒင်းအတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ ရိုးရှင်းစွာအသင့်အကောင့်ရဲ့ထိပ်ပေါ်တွင်စျေးနှုန်း '' tab ကိုနှိပ်ပါ။ သင့်အနေဖြင့်ရရှိနိုင်သည့် cryptocurrencies များစာရင်းကိုမှ redirected လိမ့်မည်။ သင်တို့သည်လည်းလက်ရှိအဆိုပါ cryptocurrencies ၏စျေးနှုန်း, အချိန်ကျော်သူတို့ရဲ့ပြောင်းလဲမှု, လက်ရှိစျေးကွက်အရွယ်အစားနှင့်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုဖေါ်ပြခြင်းပင်ဇယားတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။
သငျသညျရောင်းမဝယ်နှင့်ကုန်သွယ်ရေး '' button ကို click ချင် cryptocurrency ရွေးချယ်ပါ။ ဒါဟာရောင်း cryptocurrencies အချို့သောနိုင်ငံများတွင်ထောက်ခံမရအံ့သောငှါသတိပြုရကျိုးနပ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျကိုလညျးမှတဆင့်တစ်ကြိမ်မှာထိပ်တန်း5cryptocurrencies ဝယ်ယူ၏ထို option ကိုကမ်းလှမ်းနေကြတယ် Coinbase အင်္ဂါရပ်များပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
လက်ရှိတွင်ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်မှတဆင့် cryptocurrencies Coinbase ဆော့ဝဲအစုအဝေး BTC, ETH, LTC, BCH နှင့်စသည်တို့ကိုများမှာ
အဆိုပါ Coinbase ပိုက်ဆံအိတ်, သင်သည်စတိုးဆိုင်ကိုဝယ်ခြင်းငှါခွင့်ပြု, cryptocurrencies send and receive ။ Crypto ပေးပို့ဖို့, ရိုးရှင်းစွာသင့်အကောင့်ကိုသွားနှင့်အဆုံး '' tab ကိုနှိပ်ပါ။ ထိုအခါသင်သည်ထံမှပေးပို့လိုသောပိုက်ဆံအိတ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ထိုအခါ '' စာလက်ခံသူကဖွင့်အများပြည်သူလိပ်စာ, ငွေပမာဏကိုရိုက်ထည့်ပါနဲ့အဆုံးကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
, Crypto ခံယူသင့်အကောင့်ကိုသွားသင်ဒင်္ဂါးပြားစေခြင်းငှါစေလွှတ်ခံရဖို့ချင်သောပိုက်ဆံအိတ်ကို select ရန်။ သင်သည်သင်၏ထူးခြားတဲ့ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာနှင့်အတူပေးအပ်ပါလိမ့်မည်သည့်ပြီးနောက် '' ခံယူ tab ကိုနှိပ်ပါ။ ဤသည်မှာလိပ်စာသည်သင်ဒင်္ဂါးပြားလွှဲပြောင်းရန်ပေးပို့သူကအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Coinbase အဖိုးအခအတွက် 1.49% နှင့် 3.99% အကြားစွဲချက်။ တရားစွဲဆိုအဆိုပါအခကြေးငွေနေထိုင်ရာနှင့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုသင်တို့၏တိုင်းပြည်အပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ ဘဏ်ငွေလွှဲသုံးပြီးသိုက်သည် Coinbase ပိုက်ဆံအိတ်နှင့် SEPA လွှဲပြောင်း 1.49% မှာသတ်မှတ်ထားအနည်းဆုံးအခကြေးငွေခံရ။ debit / ခရက်ဒစ်ကဒ်လွှဲပြောင်း 3.99% ဝန်ဆောင်ခခံရ။
ဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်းတစ်ဦး USD10 အခကြေးငွေခံရပါလိမ့်မယ်နေချိန်မှာ ACH လွှဲပြောင်းသုံးပြီးသိုက်မဆိုအခကြေးငွေကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အမေရိကန်ဘဏ်အကောင့်မှထုတ်ယူတဲ့ 0.15% ကြေး (USD1.49 နိမ့်ဆုံး) ခံရပါလိမ့်မယ်နေချိန်မှာ SEPA မှတဆင့်ထုတ်ယူထားတဲ့ EUR0.15 အခကြေးငွေခံရ။
သင့်ရဲ့ရန်ထုတ်ယူ Coinbase ဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်းထုတ်ယူတဲ့ USD1.49 အခကြေးငွေဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မည်နေစဉ်ပိုက်ဆံအိတ်တစ် 25% အခကြေးငွေကိုဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ third-party wallet မှထုတ်ယူကွန်ယက်ကိုအဖိုးအခကိုဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မယ်သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
ကုန်သည်များကိုမဆိုလဲလှယ်နှင့် ပတ်သက်. ရှိသည်ဟုအသုံးအများဆုံးမေးခွန်းများကိုတစ်ခုမှာကဘေးကင်းလုံခြုံမယ့်ရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ Coinbase အားလုံးကုန်သည်အကောင့်များနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလုံခြုံကျန်ကြွင်းသောသေချာစေရန်အများအပြားခြေလှမ်းများဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ ပလက်ဖောင်းသူတို့ယနေ့ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အဲ့ဒီ့ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းအချို့နှင့်အတူလိုက်လျောဖို့ရှိသည်အဓိပ္ပာယ်အမေရိကန်အခြေစိုက်သည်။
သူတို့ကအစ USD250000 ဦးရေအများဆုံး၎င်းတို့၏အမေရိကန်ဒေါ်လာပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ခဲ့ကြကြောင်းရန်ပုံငွေများကိုသေချာစေရန်အကြီးအရှည်သွားပြီပါတယ်။ ကြောင်းသေချာစေရန်ယူဆောင်ရွက်မှုများ၏အချို့ Coinbase လုံခြုံမှုအရှိဆုံး cryptocurrency ဖလှယ်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုအကောင့်2factor authentication ကို အသုံးပြု. ကာကွယ်ထားသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ username နဲ့ password ကိုပေးမှတပါး, သင်သည်သင်၏ဖုန်းသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော Duo သို့မဟုတ် Google Authenticator အဖြစ်တတိယပါတီဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ကိုစလှေတျတိကျတဲ့ code ကိုရိုက်ထည့်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုသည်။
ဖြည့်စွက်ကာ, Coinbase သင်တို့ကိုလည်းသင့်အကောင့်သင်ကသင့်အကောင့်ကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုသောတစ်ဦးထံမှတစ်ဦးကွဲပြားခြားနား IP address ကို အသုံးပြု. ဝင်ရောက်ဖြစ်ပါတယ်အခါတိုင်းသတိပေးပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ Coinbase စတိုးဆိုင်များအားလုံးဖောက်သည်ရန်ပုံငွေများအော့ဖ်လိုင်း၏ 98% ။ ဤသည်အွန်လိုင်းမှတိုက်ခိုက်မှု၏အမှု၌, ကခိုးယူခံရဖို့အားလုံးကုန်သည်ရန်ပုံငွေများဘို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရဲ့သေချာ။
ထို့အပြင်ဤရန်ပုံငွေများကိုတစ်ခုတည်းသောအရပ်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ကြသည်မဟုတ်။ high-တန်ဖိုးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံ Multisig Vault feature ကိုမှအကျိုး။ ဒီ feature သင့်အကောင့်လုံခြုံရေးအတွက်သုံးသော့အသုံးပြုသည်။ တစ်ခုမှာ key ကိုအများပြည်သူဖြစ်ပါတယ် shared နိုင်ပါသည်။ အတူအခြားအကြွင်းအကျန် Coinbase။ နောက်ဆုံး key ကို encrypt လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ကုန်သည်မှထုတ်ပေးသည်။
သင်တစ်ဦးငွေပေးငွေယူအစပျိုးချင်အချိန်မရွေး, သင်သည်သင်၏ encrypt လုပ်ထားသော့နှင့်အခြားသော့တစ်ဦးကိုသုံးပါရှိရပါမည်။ တဦးတည်းအားသာချက် Coinbase အများအပြားယှဉ်ပြိုင်ဖလှယ်မှုကျော်ရှိပါတယ် Fiat ဘို့မိမိတို့ထောက်ခံမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင် cryptocurrency နှင့် Fiat ပိုက်ဆံအကြားပြောင်းလဲခွင့်ပြုပါတယ်။
အမှု၌သင်တို့တစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာအကောင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လို Coinbase ၎င်းတို့၏အမေရိကန်ဒေါ်လာပိုက်ဆံအိတ်ပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါလဲလှယ်နောက်ထပ်သွားသည်နှင့်ရန်ပုံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 250000 ၏ညှိဖို့ဒီပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာသိုထားသေချာ။ ကုန်သည်များကထောက်ပံ့ပေးမဆိုထိခိုက်မခံတဲ့ဒေတာတွေကိုအင်တာနက်ကနေလုံးဝပြတ်တောက်နေသောဆာဗာများထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာနောက်ထပ်အွန်လိုင်းတိုက်ခိုက်မှုကနေဒေတာတွေကိုကာကွယ်ပေးသည်။ အခုတော့ဒီအအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာ, Coinbase ပုံမှန်အားဖြင့်သင့်ရဲ့ cryptocurrency ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထိန်းချုပ်အချို့အဆင့်ကိုရပါလိမ့်မယ်။ ဤထဲမှာသိမ်းထားပါတယ် Coinbase ပိုက်ဆံအိတ်။ ဤသည် blockchain နည်းပညာကိုပထမဦးဆုံးဌာန၌တီထွင်ခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်အဓိကအကြောင်းပြချက် beats ။
ဒါပေမယ့်ပိုက်ဆံအိတ်အချို့သောအားသာချက်များကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ တဦးတည်းကပါသေးသင် platform ပေါ်တွင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်မဟုတ်တိုကင်မဝယ်နဲ့ရောင်းဖို့ခွင့်ပြုထိပ်ကိုဗဟိုဦးဖလှယ်မှုမှ access ကိုပေးသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သင်တို့သည်လည်းသီးခြားစီသင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုစောင့်ရှောက်ရန်လွယ်ကူစေသည်ရာမျိုးစုံပိုက်ဆံအိတ်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
သင်ဆဲသင့်ရဲ့ cryptocurrencies ကျော်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ရှိသည်ဖို့လိုလျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့ပြင်ပသီးခြားပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာကသူတို့ကိုသိမ်းဆည်းထားကြောင်းအကြံပြုချင်ပါတယ် Coinbase ပလက်ဖောင်း။
သင်တစ်ဦးဖွင့်နိုင်သည် Coinbase USD50 သကဲ့သို့နည်းနည်းနှင့်အတူအကောင့်။ သို့သော်လဲလှယ်ကုန်သည်အကောင့်ပေါ်တွင်ငွေပေးငွေယူကန့်သတ်ချမှတ်ထားတဲ့။ သတ်မှတ်ကန့်သတ်သင့်တိုင်းပြည်, သင်နှစ်သက်တဲ့ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းနှင့်စိစစ်အတည်ပြု status ကိုအဖြစ်အချက်များပေါ်တွင်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦးအမေရိကန်နိုင်ငံသားနေနှင့်အပြည့်အဝစစ်ဆေးအတည်ပြုအကောင့်ရှိပါကဥပမာ, သငျသညျအသီးအသီးတစ်ပတ်ကို USD50000 သလောက်စတင်မည်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျပိုမိုနှစ်သက်နေတယ်ဆိုရင်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုဘဏ်ငွေလွှဲဖြစ်ပါသည်, သငျသညျပိုမိုမြင့်မားငွေပေးငွေယူကန့်သတ်လက်ခံရယူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Coinbase လွတ်လပ်သောကုန်သည်အများစုကဖောက်သည်ထောက်ခံမှု။
နေသောဖုန်းနံပါတ်: အီးမေးလ်ကနေတဆင့်ပံ့ပိုးကူညီမှုကိုဆက်သွယ်ရန်ကြိုးစားနေသည့်အခါအမေရိကန် / ဘို့ + 1 (888) 908-7930 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ clients များ 0808 168 4635 ဗြိတိန် client များအတွက်နှောင့်နှေးအကြောင်းကိုတိုင်ကြားမှုများရှိခဲ့သည်။
ဒါက platform ပေါ်တွင်ကုန်သည်များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားဖြင့်နေ့စဉ်စလှေတျတျောခံလက်မှတ်တွေ၏မြင့်အရေအတွက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ဘုံတိုင်ကြားချက် anned 'နှင့်စေလွှတ်မေးမြန်းချက်မသက်ဆိုင်သောဟန်တုံ့ပြန်မှုကိုလက်ခံရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ နယူးကုန်သည်များပုံမှန်အားဖြင့်လဲလှယ်ရဲ့မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများနှင့်ထောက်ခံမှုစာမကျြနှာမှာရှိတဲ့ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန် features နဲ့ဘုံမေးခွန်းများကို ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်အများဆုံးရနိုင်။
အဆိုပါ Coinbase လဲလှယ်ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်အများအပြားထုတ်ကုန်များ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ တခြားသူတွေကိုအောက်ပါတို့ပါဝင်သည်: Coinbase လိုလားသူယခင် GDAX, Coinbase လိုလားတဲ့အဆင့်မြင့်ကုန်သည်များဝယ်ယူရောင်းချထူးခြားဆန်းပြားအားလုံးအတွက်န့်သတ်ချက်နှင့်အမိန့်ရပ်တန့်ဖို့ခွင့်ပြုမယ့် Real-time ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပလက်ဖောင်းထိပ်တန်း cryptocurrencies ဆန့်ကျင်ဦးဆောင်ငွေကြေးပါဝင်သည်ကြောင်း 19 ကွဲပြားခြားနားသောအားလုံးအတွက်ပေးထားပါတယ်။
အများအပြားယှဉ်ပြိုင်ပလက်ဖောင်းမတူဘဲ, Coinbase သင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးအမြတ်အစွန်းများပြားဖို့လိုတဲ့အခါနေရာလေးကိုလာရသောသြဇာပေးစွမ်းသည်။ သင်တစ်ဦးဆိုရင် Coinbase အသုံးပြုသူကိုသင်အလွယ်တကူ Pro ကိုအကောင့် upgrade နိုင်ပါတယ်။ Coinbase Paradex Coinbase မကြာသေးမီက Paradex, Etherum ERC-20 တိုကင်ကုန်သွယ်မှုလွယ်ကူစေသည်ဖြန့်ကျတ်လဲလှယ်ရရှိခဲ့သည်။
ဒီ feature အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1000000 ၏နိမ့်ဆုံးကျင်းပနိုင်ရန်နှင့်အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများပစ်မှတ်ထား။ အကောင့်တစ်ခုများအတွက်တရားစွဲဆိုအဆိုပါ setup ကိုအခကြေးငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 100000 ဖြစ်ပါတယ်။ Coinbase ချုပ်နှောင်ထားရိုးရှင်းစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများလုံခြုံစွာလုံခြုံတဲ့လမ်းအတွက်သူတို့ရဲ့ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိမ်းဆည်းထားခွင့်ပြုပါတယ်။
ဒီထုတ်ကုန်အထူး cryptocurrency ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါဟာ set up လုပ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်နှင့်သင်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိရန်မည်သည့်အဖိုးအခဖြင့်တရားစွဲဆိုမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခုမှာအဓိကအားသာချက် Coinbase စီးပွားကူးသန်းကအလွယ်တကူ Shopify နှင့် Magento ကဲ့သို့ဦးဆောင်အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးပလက်ဖောင်းနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ဗြိတိန်တွင်နေထိုင်ကုန်သည်ကြီးများယခုမကြာသေးမီကမိတ်ဆက်ခဲ့သည့်လက်ငင်းဗြိတိန်ဘဏ်ဝယ်ယူမှု feature ကိုမှအကျိုးနိုင်ပါတယ်။ ဒီ feature (3 ဖို့5ဆန့်ကျင်ကဲ့သို့သောအခြားနိုင်ငံများမှကုန်သည်များစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်အချိန်စောင့်ဆိုင်း) သင့်ဘဏ်အကောင့်နှင့်ထံမှအရှိန်မြှင့်ပြီးလွှဲပြောင်းပေးပါသည်။ ဒါဟာအစ Fiat နှင့်အခြားလမ်းပတ်ပတ်လည်ရန်သင့် cryptocurrencies ပြောင်းတစ်ခုလွယ်ကူသောလမ်းပေးထားပါတယ်။
သင်တစ်ဦးဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ Coinbase သင်သည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထိန်းချုပ်ရှိသည်လိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်အကောင့်များနှင့်အတည် ပြု. ။ သို့သော်ပလက်ဖောင်းကုန်သည်အကောင့်များနှင့်အရောင်းအ၎င်း၏သိသာစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးကျော်ဝေဖန်မှုများလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ကြောင့်ဒီလဲလှယ်အမေရိကန်အနေဖြင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှသူတို့ထွက်သယ်ဆောင်အားလုံးအရောင်းအတရားမဝင်မဟုတ်သေချာစေရန်ရမည်ဖြစ်သည်။
cryptocurrencies စေလွှတ်ဘယ်မှာကဲ့သို့သော, သူတို့ကများသောအားဖြင့်စောင့်ကြည့်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ cryptocurrencies တရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အသုံးပြုခံရဖို့ယုံကြည်သည်နေတယ်ဆိုရင်, ကကုန်သည်များအကောင့်ရပ်ဆိုင်းမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
လုံခြုံကုန်သည်အကောင့်များနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစောင့်ရှောက်ရန်လူကြိုက်အများဆုံး coinsImplements အများအပြားလုံခြုံရေး features ၏6ရာပူဇော်သက္ကာကိုအကြီးဆုံး cryptocurrency ဖလှယ်မှုများ၏တဦးတည်း
ဘရောက်ဇာသို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်း app များကိုတဆင့်လက်လှမ်း
အသုံးပြုသူအကောင့်ကိုပုံမှန်စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ် အီးမေးလ်ကသုံးတဲ့အခါဖောက်သည်ထောက်ခံမှုတုံ့ပြန်မှုနှေးကွေး သငျသညျအကောငျ့အပေါ်ချမှတ်ထားငွေသွင်းငွေထုတ်ကန့်သတ်အတွက်ရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင် cryptocurrencies ၏လီမိတက်အရေအတွက်ကို
Coinbase ကမ်ဘာပျေါတှငျအကြီးဆုံး cryptocurrency ဖလှယ်မှုများ၏ပွဲတစ်ပွဲတဦးတည်းယနေ့ဖြစ်ပါတယ်။
ပလက်ဖောင်းလည်းလွယ်ကူပါတယ် cryptocurrencies, သိုလှောင်လက်ခံရရှိနှင့်ပို့ခြင်းကြောင့်တစ်ဦးပိုက်ဆံအိတ်အပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်ပေးပါသည်။
သို့သော်အလုံးစုံကြှနျုပျတို့သညျဤအတွက်အသေးစိတ်တော့အဖြစ် Coinbase ပြန်လည်သုံးသပ်ကအဓိက cryptocurrencies ကုန်သွယ်မှုလိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖလှယ်မှုများ၏တဦးတည်းပါပဲ။
Tags: Coinbase, ငွေသား Bitcoin Coinbase, ပိုက်ဆံအိတ်ပြန်လည်သုံးသပ် Bitcoin Coinbase, Coinbase ရဲ့ login, Coinbase ပြန်လည်သုံးသပ်, Coinbase ဂယက်ထ, Coinbase ထောက်ခံမှု, blockchain ပြန်လည်သုံးသပ် vs Coinbase, Coinbase ပိုက်ဆံအိတ်, Coinbase ပိုက်ဆံအိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်, Coinbase ဆုတ်ခွာကြေး, Coinbase ဆုတ်ခွာပြန်လည်သုံးသပ်, Coinbase ထံမှပိုက်ဆံထုတ်ယူဖို့ဘယ်လို, Coinbase လုံခြုံ, Coinbase ဘာလဲ
PayPal က Accepts
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့် Manager က:
ဗီဒီယိုကလဲ tutorial ဖို့ Access ကို:
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ Access ကို:
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့် Manager ကို
ဗီဒီယိုကလဲ tutorial ဖို့ Access ကို
ကုန်သွယ်အချက်ပြမှုများမှ Access ကို
စျေးကွက်သုတေသနမှ Access ကို
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ Access ကို
အမျိုးအစား: cryptocurrency ပွဲစားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Created: ဒီဇင်ဘာလတွင် 13, 2018